Adobe Illustrator CS3 Free Download Rohy
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe Illustrator CS3 alaina maimaim-poana
By Ann Young, Aleksandra Mitreska 2022-05-11, Malagasy Blog
Hevero fa ara-dalàna ny fampidinana maimaim-poana Adobe Illustrator CS3 ary tsy hanimba ny PC-nao? Mianara bebe kokoa momba ny fomba hahazoana ilay programa maimaim-poana ary fantaro ireo safidy mahasoa indrindra amin'ity rindrambaiko ity.
Adobe Illustrator CS3 Tombontsoa maimaim-poana
Safidy malalaka amin'ny plug-in mahazatra
gradients azo zahana
Lalana véctor tsotsotra
Zoom tsy misy fetra
Fitaovana fanaovana sary mahasoa
Fampidirana amin'ny fampiharana Adobe hafa
Misy dika ara-dalàna ve ny Adobe Illustrator CS3?
Tsia. Tsy nety nanohana an'io dikan-rindrambaiko io ny mpamorona Adobe, ary nesoriny tao amin'ny tranokala, satria efa lany andro ny fiasany sy ny fahaizany ary tsy mifanaraka amin'ny programa hafa vaovao. Ny hany fomba ara-dalàna hahazoana Adobe Illustrator dia ny fampiasana ny kinova 26.0.3 farany indrindra. Na azonao atao ny misafidy Adobe Spark ho Illustrator ho an'ny asa famoronana ataonao.
Inona no maha samy hafa ny Adobe Illustrator sy Photoshop?
Mampitaha Illustrator vs Photoshop, tonga tamin'ny fanatsoahan-kevitra aho fa sary dia optimized mba hamolavola endrika lalina sy sarotra, izay manana anjara toerana lehibe ny kalitaon'ny sary tany am-boalohany. Tafiditra ao anatin'izany ny fonon-gazety, sora-baventy, karatra fandraharahana ary zavatra hafa natao ho pirinty bebe kokoa. Photoshop dia safidy tsara ho an'ny famolavolana pejy web.
Ohatrinona ny vidin'ny Illustrator?
Miankina amin'ny drafitra nofidinao, ny vidin'ity rindrambaiko ity dia mety miovaova amin'ny $ 19.99 ka hatramin'ny $ 52.99/mois. Na izany aza, aza adino fa matetika ny orinasa dia manolotra fihenam-bidy amin'ny rindrambaiko. Mba hahazoana ny vaovao farany dia azonao atao ny mijery ny lisitra feno Adobe Creative Cloud tombontsoa-bidy.
Afaka miasa amin'ny tetikasa iray ve ny ekipan'ny mpamorona?
Eny. Rehefa mampiasa Creative Cloud ho an'ny ekipa ianao dia mahazo Illustrator, Photoshop ary Acrobat ho an'ny orinasanao na ny departemantanao, ary koa ny fampiononana fitantanana fahazoan-dàlana mora ampiasaina ary ny fandrindrana loharano eo noho eo eo amin'ny kaonty efa misy.
Sary ho an'ny ekipa
Hafiriana no ahafahako mampiasa ny fitsarana maimaim-poana?
Raha toa ianao ka nanapa-kevitra ny Adobe Illustrator CS3 download maimaim-poana dikan-andrana, mariho fa azo atao mandritra ny herinandro manomboka ny voalohany fandefasana ny Illustrator. Rehefa tapitra ny fotoam-pitsarana dia hesorina ho azy amin'ny carte de crédit ny fandoavam-bola.
Inona no plug-in an'ny antoko fahatelo tohanan'ny Adobe Illustrator?
Azonao atao ny mametraka borosy matihanina, haingon-trano, endri-tsoratra, misintona ary mampiasa maimaim-poana Kisary Adobe Illustrator.
Fomba hafa hisintonana Adobe Illustrator CS3 maimaim-poana
Azonao atao ny misintona Adobe Illustrator ho drafitra tokana na ao anatin'ny Creative Cloud.
Fanohanana ara-teknika maimaim-poana
Synchronization amin'ny rindrambaiko hafa
Fahaizana miasa amin'ny fampiharana finday
Amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny drafitra Creative Cloud, azonao atao ny miditra amin'ireo endri-javatra sy fanavaozana farany indrindra, ny fitambaran'ny programa desktop famoronana manontolo, ny fampiharana finday sy ny serivisy ho an'ny famolavolana sary, sary, lamina, fanomanana horonan-tsary sy feo ho an'ny fanontana, Internet ary fitaovana finday, fanohanana ara-teknolojia maimaim-poana, ary koa ny fitahirizana rahona 100GB, endri-tsoratra Adobe Portfolio, Adobe ary Adobe Spark.
Fantaro ny fomba fampiasana Adobe Creative Cloud Free.
Raha tapitra ny fotoam-pitsarana ary tsy manam-bola handoavana ny drafitra voafantina ianao, dia mety hieritreritra ny hampiasa serivisy sy fitaovana tsy ara-dalàna toy ny Adobe Illustrator crack, Illustrator portable na "miasa" Adobe Illustrator keygen. Saingy aloha, tsara kokoa ny mijery ny lisitry ny olana mety ho entin'ny fanapahan-kevitra toy izany.
Efa naheno zavatra momba ny zon'ny mpamorona ve ianao ary afaka mitory anao ny developer? Mitranga izany raha mitady fomba fiasa ianao ny fomba fampiasana Adobe Illustrator maimaim-poana ary misintona azy avy amin'ny serivisy an'ny antoko fahatelo. Ny sazy dia mety miovaova amin'ny onitra (eo amin'ny $ 2 000) ka hatramin'ny fandroahana ny fananan'ny tena manokana, anisan'izany ny fiara, trano ary orinasa iray.
Rehefa miresaka momba ny fanohanana ara-teknika Adobe ianao dia tsy maintsy miandry ny valiny mandra-pahitany raha misy ny kaontinao ao amin'ny tahiry. Raha tsy eo ilay izy dia mety adinonao ny fanampiana matihanina. Tsara ny mampatsiahy fa ny logiciel voajirika dia mahaleo tena tanteraka ary ny kaody ao aminy dia tsy tafiditra ao anaty tahiry, na dika mitovy amin'ny efa voamarina.
Satria tsy voatanisa ao amin'ny angon-drakitra ny rindrambaiko tsy nahazoan-dalana anao, dia tsy afaka mahazo fanavaozana tsy tapaka ianao. Ireo mpampiasa ara-dalàna dia afaka manandrana ireo endri-javatra sy fitaovana vaovao avy hatrany rehefa navoaka.
Mety ho tsotra izy ireo, toy ny doka, ary ny misy antivirus tsara indrindra dia hiatrika azy ireo, na insidious, izay mavitrika rehefa manao fividianana an-tserasera. Amin'izao fotoana izao dia mandika ny angon-drakitra amin'ny karatrao izy ireo, mandefa izany any amin'ny mpizara ary manimba tena.
Adobe Illustrator CS3 Alternatives maimaim-poana
Raha tsy manam-bola hanelanelana ny famandrihana Illustrator ianao ary rehefa avy nifankazatra tamin'ireo olana mety tsy tianao hampiasa rindrambaiko tsy nahazoana alalana dia jereo ireto programa mahomby sy maimaim-poana ireto amin'ny famoronana endrika sy sary.
Isan'ny sosona tsy voafetra
Borosy manokana sy lahatsoratra
Tsotra interface tsara
Mety amin'ny matihanina
Ho an'ny macOS ihany
Sketch dia rindrambaiko matihanina amin'ny fanaovana sary sy famolavolana vector ho an'ny mpampiasa Mac OS.
Sketch dia manana interface tsotra sy fiasa matihanina mitovy amin'ny Illustrator - sosona, gradient, palette loko, fomba, borosy mahazatra, lahatsoratra ary fiantraikany. Azonao atao ny mamorona sary vaovao avy amin'ny endrika fototra na manampy sary hafa amin'ny alàlan'ny fitaovana vector na pensilihazo.
Jereo ny lisitra feno amin'ny tsara indrindra Adobe Illustrator alternatives.
Fanohanana plug-in avy amin'ny antoko fahatelo
Ho an'ny vao manomboka
Inkscape dia tonian-dahatsoratry ny sary vetaveta misy loharano misokatra malalaka ho an'ny mpampiasa vao manomboka sy matihanina.
Ho fanampin'ny fitaovana fototra amin'ny famoronana sary sy sary vetaveta, ny Inkscape dia manana fitaovana miolikolika manokana natao hamoronana môdely sy fandrafetana klones, safidy mandroso amin'ny fanodikodinana zavatra, sivana maromaro (anisan'izany ny warps, textures, overlays, sns.)
Tsy mila fampidinana na fametrahana
Maska sy sosona
Tsy nohavaozina intsony
Mila hatsaraina ny fitaovana sasany
Raha liana amin'ny fanitsiana haingana ianao, na raha tsy misy toerana malalaka ao amin'ny kapila mafy anananao amin'ny fametrahana rindrambaiko desktop, ity safidy tranonkala maimaim-poana ity dia fanoloana tsara ho an'ny Adobe Illustrator CS3 download maimaim-poana Mac na Windows.
Manolotra endri-javatra mahasoa maromaro ny fampiharana, ao anatin'izany ny fitaovana fanaovana sary, saron-tava sy sosona, endrika, lahatsoratra manokana ary borosy. Saingy tsara ny manamarika fa nanakana ny fanavaozana ity fampiharana ity ireo mpamorona, ka mahatonga azy io ho maimaim-poana. Noho izany, raha sendra olana ianao dia tsy hanana olona hifandraisana.
Na inona na inona programa ampiasainao, alaivo ary andramo ireto borosy maimaim-poana ireto. Hanatsotra tanteraka ny dingana izy ireo ary hampihena ny fotoana lany amin'ny famoronana sary.
Ampidino maimaim-poana ny Adobe Illustrator ho an'ny Win / Mac
Ampiasao ireo rohy etsy ambony dia hahazo ny kinova ofisialy farany amin'ity rindrambaiko ity ho an'ny solosainao ianao. Aza manahy raha mpampiasa vao haingana ianao, satria ity programa ity dia mety amin'ny mpampiasa amin'ny ambaratonga samihafa.
Adobe Illustrator CS3 tombony
Adobe Illustrator CS3 maimaim-poana